Mursal oo la filaayo inuu warbaahinta la hadlo - Caasimada Online
Home Warar Mursal oo la filaayo inuu warbaahinta la hadlo
Mursal oo la filaayo inuu warbaahinta la hadlo
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno Villa Somalia ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka la filayo inuu maanta la hadlay warbaahinta, sida qaar kamid ah xildhibaanadii xalay la kulmay ay shaaciyeen.
Lama oga waxyaabaha uu ka hadli doono guddoomiyaha baarlamaanka, balse waxaa la filayaa inuu ka hadlo arrimaha mooshinka iyo waxyaabaha kasoo kordhay.
Xiisad ayaa ka dhalatay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay mooshin ay diyaariyiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ka hor yimid labadiisa ku xigeen.
Xalay ayaa xildhibaanadii ugu badnaa ee gudbiyay mooshinka waxay kulan la qaateen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii sida ay sheegeen ay ka boodeen Dhagxaan lagu xiray waddada loo maro xafiiska guddoomiyaha.
La soco waxyaabaha kasoo kordha arintaan.